5 အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စစျေးကွက်အပေါ်ဂျာမဏီ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စစျေးကွက်အပေါ်ဂျာမဏီ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 01/01/2020)
သငျသညျတဖနျကတစ်နှစ်နီးပါးသောအခြိနျကာလကိုယုံကြည်နိုင်သလား? ဒါဟာဒီနှစ်အလှဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်! တကယ်ပဲဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များနှင့်အတူဝိညာဉျတျောသို့အရငျ! နှောင်းပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလကနေခရစ္စမတ်အကြိုသည်အထိ, အားလုံးဂျာမဏီကျော်မြို့ရင်ပြင်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်နှင့်အတူ buzzing နေကြတယ်. Deutschland အတွက်အများဆုံးရတနာအစဉ်အလာတစ်ဦးအဖြစ် (ဂြာမနျတွင်ဂျာမဏီ), ရောနှောကြီးတွေမြို့ကြီးများနှင့်အသေးစားမြို့များထွန်းရာသီဆင်နွှဲ. ဒီတော့ gluhwein ၏ပူပြင်းတဲ့ကော်ဖီခွက်ဖမ်းပြီးနှင့်ဤအတွက်ပွင့်လင်းမီးပေါ်မှာ roasting သစ်အယ်သီးလွဲချော်ပူအစက်အပြောက် holiday မနိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့ကိုပွငျဆငျ.
1. Frankfurt Romerberg ပြီးတော့စိန့်. Pauls စတုရန်းခရစ္စမတ်စျေးကွက်
ဒါဟာဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်အိပ်မက်ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်ကားအဘယ်သို့. မြို့အဟောငျးမြို့အတွင်းပိုင်း Frankfurt ၏ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှား Escape, သောခရစ္စမတ်ရာသီအတွင်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်တစ်ဦးခရစ္စမတ်သို့လှည့်. Romerberg နှင့်စိန့်. ရှင်ပေါလုသည်စတုရန်းပုံဝက်သစ်အိမ်၏ဖွင့်ထား. သူတို့ဟာအလင်းအိမ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းသစ်သားတဲနှငျ့ပွညျ့စုံနေကြတယ်, အဆင်တန်ဆာ, နှင့်ပန်းကုန်း. နာမည်ကျော်လက်လွတ်ဖို့မသခြော Be အဆိုပါခေါင်းလောင်း၏ pealing, ဟောငျးမြို့အသင်းတော်ကိုခေါင်းလောင်းတစ်ခုအံ့သြဖျော်ဖြေပွဲအတွေ့အကြုံအတွက်ခရိုင်တလျှောက်လုံးအညီထုတ်မြည်ရာအတွက်ခရစ္စမတ်အကြိုအစဉ်အလာ.
Frankfurt ထက်တစ်ဦးကသေးငယ်ကိစ္စ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်မှော်! ဒါကဘယ်လ်ဂျီယံနယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင်တောင်များအတွင်းအလတ်စားသေးငယ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်. Monschau တကယ်ဂျာမဏီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များနှင့်အတူခရစ္စမတ်အချိန်တွင်အသက်ရှင်လျက်လာ.
မြို့ခရစ္စမတ်အလှဆင်ဒေသခံတွေခရစ္စမတ်၏အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာတစ်နှစ်ဖွင့်လှစ်ကြပါပြီဒါကြောင့်လူကြိုက်များဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြ. ဒါကြောင့်, သင်သည်မကျင့်လျှင်ခရစ္စမတ်လိုပဲ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤကျိန်းသေအသက်ရှင်ဖို့ရာအရပ်မဟုတ်ပါဘူး! တစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်မှမွှေးသို့မဟုတ်အ Dusseldorf, စောင့်ကြည့်သွားမြို့အကြင်းတွင်ဆည်းနေစဉ်စားႏုိင္မအပေါ်သူတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာ Monschauer Dutchen spongecake နှင့်ရင်းစပျစ်ရည်ကိုပေးရဦးခင်ပြန်မှမြို့. ယင်း၏ cobblestone လမ်းများနှင့်အတူ, နှင်းထိပ်ဆုံးဝက်သစ်အိမ်, ထိုသို့စီးဆင်းအကွေ့အကောက်များသော idyllic ၏တိုတောင်းသောအချည်းနှီးဖြစ်၏.
ဒါဟာကျိန်းသေဥရောပအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် လှပသောအလယ်ခေတ်မြို့ရွာ. ဒါဟာပိုပြီးရုပ်ရှင် set ကိုတူဒါပါဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ခရစ္စမတ်အချိန်တွင်အထူးသဖြင့်မှန်သည်နှင့်ဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်အချို့ကို hosting များကမီးမောင်းထိုးပြနေသည်.
တံခါးဝနှင့်ကာကွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ၏ silhouette တစ်နတ်သမီးပုံပြင်၏ aura သဘောဆောငျ. သငျသညျဟောင်းတံခါးကတဦးတည်းကတဆင့်ဝင်အဖြစ်, သင်ချက်ချင်းခံစားရတဲ့လုံခြုံသောအချိန်အတွင်းဂုဏ်အကာ၏နံရံသည်ဤချစ်ရာအရပျ. Rothenburg ဝိဇ္ဇာအတတ်အားအတိတ်ကာလကိုကျော်နိုင်ကြထားပါတယ် 1,000 နှစ်နှင့်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များပေါ်သို့၎င်း၏စာလုံးပေါင်းကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်.
15 ရာစုကတည်းက, အံ့သြဖွယ်ခရစ်စမတ်စျေးကွက်အမြဲတမ်းပွဲလမ်းသဘင်ခရစ္စမတ်ရာသီတစ်ခုအင်္ဂါရပ်ခဲ့. ဒီဈေးကွက်အပေါ်မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အ 500 နှစ်အစဉ်အလာ, နှင့်ဤအချိန်ကတည်းက၎င်း၏သမိုင်းဝင်ဇစ်မြစ်ကနေအနည်းငယ်သာပညာရှိရှိပြောင်းလဲသွားပြီ. မြောက်မြားစွာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ရပ်များသည်ဤစျေးကွက်နှင့် တွဲဖက်. ကျင်းပကြသည်. စျေးကွက်၏မီးမောင်းထိုးပြ, သို့သော်, သည်၏အသွင်အပြင် Rothenburg မွငျးစီးစ, အဘယ်သူသည်ဤဈေးကွက်သည်၎င်း၏အမည်အားပေးခဲ့တယ်. သမိုင်းဇာစ်မြစ်၏ မြင်း မှကြွလာသောအမှုန်နှင့်ဝေးသောအတိတ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်သူတို့အခြားကမ္ဘာမှရောက်လာသောသံတမန်တို့ဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်, အဘယ်သူသည်ဆောင်းရာသီအတွက်အသေကောင်၏အသက်ဝိညာဉ်အားဖြင့်မိုဃ်းကောင်းကင်မှတဆင့်မြော. သို့သော်ဤဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင်များ၏ပုံရိပ်ကိုရာစုနှစ်ကျော်ပြောင်းလဲသွားပြီ. တဦးတည်းကဒီကျောချမ်းဖွယ်ကိန်းဂဏန်းမတိုင်မီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဖို့အသုံးပြုသွားရမည်အကြောင်း, ယနေ့တွင်, ငယ်ရွယ်ပြီးဟောင်းကသူ့အိမ်ပြန်ရန်မျှော်လင့်. အဆိုပါရိုင်းမြင်းစီးသူရဲတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးတမန်ဖြစ်လာသည်.
ဘာလင် Rothenburg မှ ob der Tauber ရထား
စတုဂတ် Rothenburg မှ ob der Tauber ရထား
မြူးနစ် Rothenburg မှ ob der Tauber ရထား
Rothenburg ob der Tauber ရထားမှ Frankfurt
4. မြူးနစ် Marienplatz ခရစ္စမတ် Market က
အဆိုပါမြူးနစ်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်၏ရှင်ဘုရင်နှင့်ဂျာမနီရှိအကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်၏တဦးတည်း. ဤသည် Christkindlmarkt Marienplatz တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, မြူးနစ်အဓိကစတုရန်း, ကြည်နူးဖွယ်ငျးကုအနီးအနားသို့ထွက်ဖိတ်နှင့်အတူ စျေးဝယ်လမ်းများ အဖြစ်ကောင်းစွာ.
သောကြောင့်မြူးနစ်ဟောငျးမြို့အတွက်၎င်း၏ဗဟိုတည်နေရာ, ဒီဝေးနေဖြင့်အများဆုံး touristy နှင့်လူစည်ကားစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ထိုသို့များအတွက်ရေပန်းစားသည်အကြောင်းပြချက်: ရိုးရာလက်ဖြစ်လက်မှုပညာ၏တင်းကုပ်ပြီးနောက်တင်းကုပ်, ကြည်နူးဖွယ်မုန်ဝယ်ယူခံရဖို့အပေါင်းတို့သည်လည်းချစ်၏နောက်ခံအ Neues Rathaus. ပိုပြီးတင်းကုပ်များနှင့် Christkindl စာတိုက်ကြည့်ရှုရန် Rathaus ၏ဝင်းသို့ဘဲရန်သေချာစေပါ, သင်သည်သင်၏အခုတော့ရွာသားတွေ / အက္ခရာများများအတွက်အထူး Christkindl တံဆိပ်ခေါင်းရနိုင်ရှိရာ.
PS: အပိုမှော်အမြင်အရ, သေချာပါစေတက်စိန့်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအသင်းတော်မျှော်စင်ပြီးနောက်နေဝင်ချိန်လည်း!
5. အဆိုပါ Nuremberg Christkindlesmarkt
အဆိုပါ Nuremberg Christkindlesmarkt, သို့မဟုတ် Nuremberg ခရစ်စမတ်စျေးကွက်, ဟာ Germanys အကျော်ကြားဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်. ခရစ္စမတ်စျေးကွက်အပေါ် Nurembergs ဓိကေစ်းကာင္တြင္စာရွက်စာတမ်းများပထမဦးဆုံးဖော်ပြခြင်းကတစ်နှစ်အတွက် 1628, ဒါပေမယ့် Nurembergers ကပင်ထပ်မံကျောစတငျရယုံကြည်.
စောင့်ရှောက်ခြင်းအစဉ်အလာအတွက်မရှိမဖြစ်, နှင့်သူတို့၏ဥစ္စာရောင်းငျးကုအများစုအားလုံးဒေသတွင်းထားကြပါတယ်အရာရောင်း. တောင်မှသစ်သားတင်းကုပ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ဒေသတွင်းရင်းမြစ်ထားတဲ့ Spruce ၏လုပ်နေကြတယ်!
သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ 180 သူတို့သည်မြို့ကိုမကန့်သတ်အတွင်းထုတ်လုပ်လျှင်သာကဲ့သို့သောဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုနှင့်တိကျစွာချိန်တွယ်နိုငျသောမူရင်း Nuremberger ဖို့ခရစ္စမတ်မှာ Nurembergers အိမ်များကိုအလှဆင်သောအစဉ်အလာတံစဉ်များကိုအမျိုးသားများအနေဖြင့်အရာရာရောင်းသစ်သားတဲ 23 ဂရမ်.
ဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ္စမတ်၏မှော်ခံစားရရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? ထိုအခါမှကိုကျော်ပေါ်ဦး တစ်ဦးကရထား Save နှင့်မိနစ်အတွက်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စစျေးကွက်အပေါ်ဂျာမဏီ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ခရစ္စမတ် .ရာဝတီ europetravel မင်္ဂလာပါ longtrainjourneys